Apple Dị Njikere Maka Tombọchị Echi Global Accessibility Day | Esi m mac
Echi bụ ụbọchị Tọsdee nke atọ n'ọnwa Mee ma ọ bụ ya mere Renessbọchị Nweta Ọzụzụ Globalwa. Nke a bụ emume Daybọchị ofwa nke Ọmụma nke nnweta Weebụ. Teknụzụ na-aga n'ihu yana ya na andntanetị na ọtụtụ mmadụ ndị na-eji ngwa abụọ ahụ nwere nsogbu nnweta na n'ihi nke a ọ dị mkpa ka webata na okwu nke okwu ndị a.
Apple maara nke a ma kemgbe afọ 2011, mgbe onye nrụpụta weebụ Joe Devon kwuru banyere nsogbu ụdị ndị a chere, ọ kwụsịbeghị ịgbalị mbọ nke mere na ndị ọrụ nke ngwaahịa ya nwere nsogbu nnweta adịghị eche ịkpa oke ma ọ bụ iche.
Bọchị a enweghi ụbọchị ememme a na-emezi na ọ bụ n’oge ahụ kpebiri na a ga-eme ya kwa afọ na Tọzdee nke atọ nke Mee. Bọchị ahụ bụ echi, Apple dịkwa njikere ime emume taa. Banyere ngwaahịa ya, ọ bụghị onye nzuzo Ha bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị ọsụ ụzọ na-eme ka ngwa ahịa ha nweta etu esi arụ ọrụ ha.
Agbanyeghị, ụbọchị a anaghị elekwasị anya naanị n'ịhụ ihe ụlọ ọrụ ọ bụla na-eme n'ihe metụtara ịnweta na ngwaahịa ya. Nnweta nnabata web na-ezo aka etu esi eme nchọgharị na ,ntanetị, otu esi ejikwa ọdịnaya ahụ ma ọ bụ otu esi ejikọ ya na ndị mmadụ nwere nsogbu nnweta.
Apple chọrọ ka onye ọ bụla mara usoro ọ gbasoro n'okwu a ma maka nke a, ọ kwadebela ọtụtụ mmemme n'etiti nke anyị nwere ike ịhụ okwu lekwasịrị anya na ịnweta, nchịkọta ngwa yana nnweta, ngwa ndị na-enyere aka nnweta nakwa nke ọhụrụ New weebụsaịtị maka inweta Nka na ụzụ Nkwado.
Okwu ndị ndị Cupertino zubere bụ ndị a ga - eme na ụlọ ahịa iri na otu Apple nwere na mpaghara Spanish:
Nweta: Ọhụụ na Mac
Maka ndị isi na -adị anya na-achọ ịmụ etu esi eji teknụzụ enyere aka na OS X na Mac.
Storelọ Ahịa Apple Paseo de Gracia Barcelona (Wenezde 25 - 17:15)
Apple Store Madrid Gran Plaza 2 (Tọzdee 19 - 17:15)
Ibilitynweta: Nkà nke anụ ahụ na Mac
Maka ndị ọrụ nwere nsogbu iji keyboard, òké, ma ọ bụ trackpad; Nzukọ a na-akụziri gị otu esi eji mmegharị ahụ agagharị na otu esi ejikwa olu gị jikwaa Mac gị.
Apple Store Barcelona Paseo de Gracia (Tọzdee 19 - 17:15)
Apple Store Valencia Calle Colón (Tọzdee 19 - 18:45)
Nnweta: aringnụ na iPad na iPhone
Iji chọpụta uru nke iPad na iPhone maka nsogbu ntị anụ.
Apple Store Madrid Xanadú (Thursday 19, 16:15)
Apple Store Valencia Calle Colón (Tọzdee 19 - 10:15)
Ibilitynweta: Nkà nke anụ ahụ na iPhone na iPad
Iji chọpụta atụmatụ iOS nke na-eme ka ọ dịrị ndị na-esiri ike imetụ akara ngosi aka ma ọ bụ jiri mmegharị aka iji ihuenyo Multi-Touch.
Apple Store Valencia Calle Colón (Tọzdee 19 - 14:45)
Nweta: Ọhụụ na iPad na iPhone
Maka ndị na-adịghị ahụ ụzọ, ndị chọrọ ịmụta etu esi eji teknụzụ enyem aka nke iPhone na iPad.
Storelọ Ahịa Apple Paseo de Gracia (Tọzdee 19 - 12:15, Fraịde 27 - 17:45)
Storelọ Ahịa Apple Barcelona La Maquinista (Tọzdee 19 - 18:15)
Apple Store Madrid Puerta del Sol (Tọzdee 19, 19:15)
Apple Store Madrid Parquesur (Tọzdee 19, 10:15)
Apple Store Madrid Xanadú (Thursday 19, 10:15)
Apple Store Murcia Nueva Condomina (Tọzdee 19, 17:15)
Iji debe ebe na okwu ndị a, nke bụ n'efu, ị nwere ike tinye websaịtị ndị a:
N'aka nke ozo, dika na nchịkọta ngwa nke Apple chọrọ ka a mata ị nwere ike ịga na adreesị na-esonụ AppStore.com/A nweta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple dị nkwadobe maka echi maka Accessbọchị Ọhụta Nnweta Global